Badda somalia - iftineducation.com
aadan21 / April 16, 2009
Waxaana dhici karta in Badda Soomaaliya lagu wareejin doono Hay’ad hoos timaada Qarammada Midoobey si ay uga kirayso dalal shisheeye..
SomaliTalk.com: Waa Shabakad Warbaahin iyo xog aruurin isugu jirta, kana mid ah kuwa ugu da’da wayn Mareegaha Soomaalida. Waxayna aad isugu howshaa inay soo gudbiso Baaritaano, Faallooyin, Warbixin iyo Qormooyin, laxiriira Badaha iyo Bariga Soomaaliya, kuwaas oo u badan dhacdooyin horay u dhacay oo ay soo faagto iyo waxyaabo Mustaqbalka la qorshaynayo inay dhacaan oo ay soo bandhigto ama ka digto. Sida warbixintaan oo kale iyo dabcan wararkii iyo maqaalladii maalinlaha ahaa.
Badda ku xeeran dhulka Soomaalida, oo dhererkeeda lagu qiyaaso 3333km – bilicda iyo quruxda ka sokow- waxay ka mid tahay badaha ay ku jiraan khayraadka ugu badan adduunka ee aan weli la daah-furin ama laga faa’iidaysan. Khayraadkaas waxaa ka mid ah kalluunka noocyadiisa kala duwan, oo haddii si wanaagsan looga faa’iidaysto kobcin kara dhaqaalaha Soomaalida, soona gelin kara lacag adag haddii si cilmiyaysan loo iib geeyo, oo shaqo u abuuri kara dadka ku dhaqan xeebaha ama xeeb-joogta.
Khayraadkaas – badankiis – waxa uu qarka u saaran yahay in 13ka May 2009 laga wareejiyo mulkiyadda Soomaalida. Waxaa dhici karta badda ku xeeran dhulka Soomaalida in lagu wareejiyo “Kenya, Jabuuti, Ethiopia iyo Yemen“. Sidoo kale waxaa dhici karta in badda Soomaalida ay la wareegto hay’ad hoos timaada Qarammada Midoobey si ay uga kirayso dalal kale oo ka baaran kara Macdan, Batrool iyo Gaas, isla markaana adeegsan kara khayraadka ku jira halkaas – ayadoo aan arrintaas Soomaalida laga talo gelin.
Akhristaha waxaa dhici karta in ay ku soo degdegto su’aasha ah: Sidee ku dhici kartaa in badda ku xeeran dhulka Soomaalida lagu wareejiyo Kenya, Jabuuti (in kasta oo Jabuuti aysan meel naga jirin), Ethiopia iyo Yemen ama in Qarammada Midoobey inta ay la wareegto ka kireyso dalal kale oo halkaas shidaal ka qota ama ka gurta kalluunka, sidaasna ay badda Soomaalida faraheeda uga wareegto?
Arrinta ugu weyn ee xilligaas (1994) uu Xeerka Badaha Adduunku wax ka bedeley waxay ahayd in la kordhiyey fogaanta inta ay xeebta ka durugsan yihiin biyaha badda ay leeyihiin dalalka xeebaha leh, taas oo ahaan jirtey 3 nmi waxaa laga dhigay meel xeebta ka durugsan ilaa 12 nmi (22 km), waxaana qaybtaas loo aqoonsaday in ay ka mid tahay dhulka dalka xeebta leh – eeg sawirka hoose – barta (TS). Islamarkaas fogaan xeebta ka durugsan ilaa 24nmi waxaa loo tixgeliyey in ay tahay aag la ollog ah dalka xeebta leh (CZ).
Waxaa kale oo dalalka xeebaha leh loo ansixiyey in ay leeyihiin xuquuqda gaarka ah ee kalluumaysiga iyo khayraadka badda ilaa meel xeebta dalkaas u jirta 200 nautical miles (370 km). Waxaa kale oo xeerkaasi xuquuq u siinayaa in dal kasta oo leh xeeb badda gudaha usii gashan uu gaar u lahaanayo xuquuqda batroolka, gaaska iyo khayraadka kale ee ku jira badda ilaa 200 nmi (370 km) meel ka durugsan biyaha xeebta dalkaas – toosna ugu beegan xeebta (macne weyn ayaa ku jira hadalka ah “toos ugu beegan xeebta“).
Continental Shelf (Qalfoofka Qaaradda – waa inta dhulka ah ee si toos badda u sii dhex gashan).
Sida aan warbixintan ku arki doono, waxaa jira qorshe hadda ka socda Qarammada Midoobey oo lagu doonayo in wax laga bedelo “Xeerka Badaha Adduunka”, waxaa qorshuhu yahay in la kordhiyo fogaanta 200nmi oo laga dhigo ilaa 350 nmi (648 km) – Sidaas daraadeed waxaa la kordhinayaa waa Aagga Gaarka ee Ganacsiga ee EEZ.
LAAKIIN, waxaa shardi ah in dalalka leh xeebaha ugu dambayn 13ka May 2009 ay Qarammada Midoobey u gudbiyaan macluumaad iyo xog la xiriirta cabbirka rasmiga ah ee badda dalalkaas si loogu kordhiyo fogaanta. Haddii kale waxaa dhici doonta in dalkii aan waqtigaas ku soo gudbin xogta uu markaas waayi doono xuquuqda badda – wixii ka baxsan 200nmi – oo lagu wareejiyo dalal kale ama Hay’ad ay Qarammada Midoobey samaysay oo shirkado ama dalal kale ka sii kiraysa badda dalkaas aan macluumaadka ku soo gudbin waqtiga kama dambaysta ah ee kor ku xusan.
Laakiin, Soomaaliya taas waa ka duwanayd. Sannadkii 1967 ayaa Soomaaliya waxay fogaantii 12nmi ee badda dalku leeyahay ka dhigtay 200 nmi (370.4km). Sida aan hoos ku arki doono, dawladdii Soomaaliya waxay sharci rasmi ah oo arrintaas jidaynayay ka soo saartay sannadkii 1972 – Taas macnaheedu waa in Soomaaliya aysan aqoonsanayn Aagga Gaarka ah ee Ganacsiga (EEZ), balse aaggaas ay u aqoonsan tahay in uu ka mid yahay dhulka Soomaalida (TS). Soomaaliya aragtideedu waxay ahayd in ay ka faa’iidaysan karto baddeeda haddii ay kordhiso badda ay xaqa u leedahay – arrintaas buugaag badan ayaa laga qoray.
Dawladdii Soomaaliya oo ka hadleysey qeexidda Aagga Ganacsiga ee loo yaqaan EEZ iyo sida ay u aragto waxay tiri “Habka ugu macquulsan ee ay tahay in lagu magacaabo aagga badda ee qaranka waa in la yiraahdo badda ka tirsan dhulka dalkaas, halkii laga oran lahaa Badda Ganacsiga ee Gaarka u ah dalkaas. Dalalka soo koraya dantooda waxaa loo adeegi karaa marka badda dalalkaas ay ahaato fogaan ku xadaysan 200 nmi. Waa in aysan fikir ahaan noqon Badda Gaarka ah ee Ganacsiga, balse hab firkir ahaan waa in ay noqoto bad ka tirsan dhulka dalalkaas”.
Shaxda Dalalka iyo badda inta ay hore u sheegteen – Warbixintii UN-ta ee May 28, 2008.
Qodobka Part XI waxa uu ku saabsan yahay xad u samaynta badda wixii ka baxsan Aagga Gaarka ah ee Ganacsiga (EEZ). Waxaana qodobkaasi sheegayaa in aaggaas wixii ka baxsan ay noqoneyso Bad Caalami ah oo ay maamulaan Beesha Caalamka, gaar ahaan hay’ad Qarammada Midoobey samaysay oo loo soo gaabiyo ISA (International Seabed Authority), hay’addaas oo qaabilsan macdanta ku jirta ubucda badda hoosteeda. Waxay hay’addaasi bixin kartaa ogolaanshada iyo shatiyada sahaminta iyo baarista macdanta ee badda ka baxsan aagga EEZ, iyada oo macaash ka qaadanaysa.
Haya’dda ISA in la asaaso waxaa la soo jeediyey 1982, kulankii Qarammada Midoobey ee lagu qabtay Jamaica. Waxaase la ansixiyey 16kii November 1994, laakiin waxay ISA si rasmi ah u hawl gashay June 1996. Xarunteeduna waa magaalada Kingston ee dalka Jamaica.
Soomaaliya, sidii aan kor kusoo aragnay, waxay ka mid ahayd dalalka Afrikada Bari ee saxiixay, oo haddana dhaqan geliyey Xeerka Badaha – inkasta oo markii xeerkaasi sida rasmiga ah dhaqan galay 1994 aysan Soomaaliya ka jirin Dawlad Dhexe – oo dagaal sokeeye ka bilowday December 1990. Dagaalkaas oo sababay burbur ku dhacay dhammaan hannaankii dawladeed. Khasaaraha naf iyo maal ka sokow, waxaa burburay wixii xog, macluumaad, dukumiinti iyo tixraac ahaa ee Soomaalida ugu kaydsanaan jirey madxafyada iyo diiwaanka dawladda. Waxaa burburay dhaqaalihii dalka, waxaana dalka ka baxay in badan oo ka mid ah dadkii wax u bartay.
13kii March 1997 ayaa markii ugu horeysey waxaa la doortay Guddiga Xadaynta Badaha oo ka kooban 21 xubnood. Guddigaas oo loo soo gaabiyo CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf ) waxaa la soo doortaa shantii sanoba mar. Sidaas daraadeed guddigii koowaad oo hawshiisa bilaabay 16kii June 1997 waxaa la bedeley 16kii June 2002, waxaana guddigaas sii bedeley guddiga hawsha hadda gacanta ku haya oo shaqadiisa bilaabay 16kii June 2007 (ee shanta sano 2007-2012). Guddigaasi waa kan u xil saaran in ay falanqeeyaan oo go’aamiyaan xogta iyo macluumaadka badaha ee ay dalalku ku soo wareejiyaan ee la xiriirta xadaynta aagga ganacsiga badaha.
Sida ku cad Xeerka Badaha Adduunka ee UNCLOS, dalalka doonaya in ay calaamadiyaan xadka badda dhulkooda inta ka baxsan 200 nautical miles (nmi), waxaa laga doonayaa in ay Guddiga loo Xilsaaray Xadaynta Badaha u keenaan ama ku soo wareejiyaan akhbaar cilmiyeedka ku saabsan Juquraafiga iyo xadka badda dalkaas (oo Email ugu diraan: doalos@un.org ama toos ugu geeyaan xafiiska UN-ta ee New York) . Waana in guddiga (CLCS) xogtaas lagu wareejiyo inta ka horeysa May 13, 2009. Guddigaas ayaana go’aan ka gaaraya xogta.
ama aan ka durugsanaan karin 100 nmi meesha uu maro cabbirka 2,500 metre isobath oo ah xarriiq isku xireysa meel badda hoos u gashan ilaa 2,500 mitir. (Halkaas weeye meeshii ay dawladdii Soomaaliya maanka ku haysay markii ay qoraysey Xeerka #37/1972 qodobkiisa 2aad oo dhigaya “Meesha cabbirka laga bilaabayo waa meesha ugu hoosaysa xeebaha Soomaaliya” — xeerkaas markaa la waafajiyo xeerka cusub ee badaha macnaheedu waxa weeye: si loo xadeeyo badda Soomaaliya waxaa laga qiyaas qaadanayaa barta ugu hoosaysa dhammaanta xeebaha Soomaaliya oo markaas hoos looga sii socon karo 2.5km (2,500 mitir).
Australia waxay 15kii November 2004 xogta iyo cabirka xadka cusub ee badaheeda ku wareejisey Guddiga Xadaynta badaha – waxaa ka horeeyey Ruushka iyo Brazil oo keliya. Afar sano kaddib, ayaa Qarammada Midoonbey waxay 9kii April 2008 dalka Australia u ansixisay in ay kordhisan karto cabirka baddeeda, kuna darsan karto bad ay baaxadeeda ama bedkeedu yahay 2.5 million km2 (square kilometers) oo siyaado ah, oo bannaanka ka ah fogaanta 200nmi.
Soomaaliya waxay Qarammada Midoobey xubin ka noqotay 20kii September 1960. Dawladdii Soomaaliya waxay saxiixday heshiiskii badaha (1982), waana dhaqan gelisey heshiiskaas (1989). Waana dal ka mid ah dunida soo koreysa, kuwa ugu hooseeya. Sidaas daraadeed waxay ahayd in Soomaaliya ay ka faa’iidaysato lacagta Sanduuqa Taageerada si ay u samayso cabbirka badda ee looga baahan yahay si loo xadeeyo badda Soomaaliya oo markaas loogu kordhiyo fogaan ilaa 350nmi.
Waxaa xusid mudan in arrintani ay la xiriirto Ganacsi iyo dhaqaale lumaya/dhumaya. Sidaas daraadeed waxaa muhiim ah in laga fekero sidii ay Soomaalidu u adeegsan lahayd Qodobka Article 79 ee Xeerka Qarammada Midoobey ee ku saabsan heshiisyada in laga bixi karo marka ay dhacaan arrimo aan bini’aadamku wax ka qaban karin – oo Afka Faransiiska lagu yiraahdo “Force Majeure“, luqadda Ingriiskana ku ah “superior force” – maadaama Soomaaliya ay ka jireen dagaallo iyo xasillooni la’aan Dec 1990 ilaa 2009.
Sidaas daraadeed, haddii wax kale la qaban waayo, oo ay suurta geli weydo in xogta lagu keeno waqtiga loo qabtay, waxaa markaas muhiim ah in Qarammada Midoobey lagu qanciyo in dhulka Soomaalida maadaama ay dagaallo iyo deganaansho la’aan ka socdeen ilaa markii la ansixiyey xeerka badaha (1994), oo aysan jirin dawlad awood u leh soo ururinta xogta xadaynta badaha dhulka Soomaalida, markaas in waqtiga dib loogu dhigo ilaa muddo macquul ah.
“Su’aasha ku saabsan meesha ay Kenya ka dhigeyso xadkeeda ay badda kala wadaagto dalka deriska kala ah WaqooyigaBari ee Soomaaliya waxay muddo dheer walaac ku haysay madaxda Kenya isku daygooda in ay Batrool ka sahamiyaan aagga Lamu. Laakiin maadaama Soomaaliya aysan hadda ka jirin Dawlad Dhexe, ama wax dawlad ah oo sharci ah, Soomaaliya ma joogto meeshii ay (Qarammada Midoobey) ku keeni lahayd dukumiintiga looga baahan yahay si ay u xaqiiqsato xeebta aagga baddeeda, sidaas daraadeed waxaa dhici karta inay dhulka baddeeda weydo oo ay qaataan Kenya, Jabuuti, Ethiopia iyo Yemen,” waxaa sidaas qoray wargeyska Ratio Magazine oo ka soo baxa Kenya, caddadkiisii 9kii February 2009.
Wargeyska Ratio Magazine, waxa uu qormadiisa ku daray “Dhacdooyinka Burcad badeedka ee ku soo badanaya biyaha Soomaaliya awgeed, waxay u badan tahay in beesha caalamku ay aqbali karaan biyaha Soomaaliya in ay gacanta u galaan maamul ka mid ah dalalka la deriska ah ee xasiloon.”
Kenya sida ay sheegtay, waxay xogta xadaynta baddeeda ku geyn doontaa waqtiga ay Qarammada Midoobay dalalka u qabatay in ay akhbaarta ku keenaan (May 13, 2009). Guddiga Xadaynta Badaha waxay website ku daabacaan xogta loo gudbiyo, sidaas daraadeed la arki doonee halka ay Kenya mariso khadka xadaynaya baddeeda ee aagga la olloga ah Lamu oo ku dhow Raas Kambooni – sida aan ku arki doono warbixintan dhankeeda hoose, Kenya waxay Qarammada Midoobay u gudbisay qoraal hordhac ah oo ay si qayaxan u cabiratay qaar kamida badda Soomaalida.
Jabuuti: Wargayska Ratio waxa uu xusay “Jabuuti”. Waxaase dhici karta in wargeysku uu si af-gobaadsi ah u xusay Jabuuti, waayo dadka reer Jabuuti waa Soomaali mana laga filan karo inay kusoo durkaan badda ay wadaagaan Soomaali wayn iyagoo ka faa’iidaysanaya duruufta. Arrintaasna waxaa cadayn u ah in Jabuuti ku mashquulsanayd ilaa markii dowladii Soomaaliya dhacday sidii ay markale dib ugu soo laaban lahayd dawlad Soomaaliyeed.
Fogaanta waxaan ka cabirray GoogleEarth, intaas waa ka yaraan kartaa ama ka badan kartaa…
Loolka iyo Dhigaha mara Soomaaliya ka Eeg Halkan…. [pdf]
Jasiiradda Suqadara (Socotra) – oo November 30, 1967 gacanta u gashay Yemen – waxay xeebta Soomaaliya u jirtaa 150 mile oo keliya. Islamarkaas Suqadara waxay xeebta Yemen u jirtaa 190 mile. Jasiiradaha yaryar ee la xiriira Suqadara waxaa ka mid ah Cabdul Khuuri (Abd-al-Kuri) oo 50 mile oo keliya u jirta Raas Casayr (Gardafuul) oo ah Soomaaliya. Waxa kale oo Suqadara hoos taga labada Jasiiradood ee Samhah iyo Darsa (oo loo yaqaan Walaalaha “Brothers“) oo u dhaxeeya Khuuri iyo Suqadara.
Dhanka xiga Waqooyiga Soomaaliya, waxaa xadka baddu ka soo bilowdaa qiyaastii 85nmi (157km) meel dhanka Bari kaga aadan Baab Al Mandab, bartaas cabirka laga soo bilaabayo oo dhacdo Loolka iyo Dhigta 11° 50′ N iyo 44° 10′ E. Waxaana halkaas ka bilaabanaya xarriiq u socota dhanka WaqooyiBari (NE) oo fogaan is-leeg u jirta Yemen iyo Soomaaliya. Waxaana xarriiqdaasi soconeysaa qiyaastii 420nmi (778km) ayadoo sii dhex maraysa badda Gacanka Cadmeed ilaa ay gaarto barta leh Loolka iyo dhigta 13° 32′ N iyo 51° 06′ E.
Bartaas marka la gaaro waxaa xarriiqda xadaynta caqabad ku noqonaysa Jasiiradda Cabdi Al Khuuri oo Koonfurta ugu xigta Jasiiradaha la xiriira Suqadara. Halkaas oo xarriiqdii ay markaas si degdeg ah ugu leexanayso Jihada KoonfurBari (SE) iyada oo ku dhammaaneysa barta leh Loolka iyo Dhigta 9° N iyo 54° 30′ E bartaas oo fogaan is leeg oo ah 200 nmi u jirta Raas Xaafuun iyo Jasiirada Darsa oo Koonfur kaga aadan Suqadara. (Raas Xaafuun waxa ay dhacdaa barta 10°26’36″N, 51°24’54″E).
Jabuuti-Soomaaliya-Yemen: Xeebta kooban ee dhaxaysa Jabuuti-Soomaaliya waxaa lagu xadeeyay heshiis dhaxmaray Ingriiska (British Somaliland) iyo Faransiiska (French Somaliland/ Jabuuti), heshiiskaas waxa uu dhacay 2dii ilaa 9kii February 1888. Xariiqada xadaynaysa (dhulkii ay qabsadeen Anglo-French) waxay dhanka xeebta ku beegan meesha loo yaqaan ceelasha oo ku dhaw Lawyacaddo (The Geographer 1979: 3). Xadaynataasi waxay maraysaa meel waxyar WaqooyiBari ka xigta Lawyacaddo oo ku taal xeebta Gacanka Cadmeed, bartaas oo dhacda loolka iyo dhigta 11°27’55″N iyo 43°15’45″E. (Waxaa jira cabbir inyar kaas ka duwan oo ku xusan buugga Browlie (1979: 773) oo ah 11°27’45″N iyo 43°15’35″E). Xagga badda waxaa xadaynaya jasiiradda Ras Bir oo Jabuuti ah iyo jasiirada Ceebaab oo dhanka Soomaaliya. Xagga aagga ganacsiga (EEZ) ee xadaynaya Yemen-Jabuuti-Soomaaliya waa meel qiyaastii 60nmi u jirta xeebta labada gebi ee badda, bartaas oo dhacda 11°55’N iyo 44°07’E (in kasta oo qiyaastaasi wax yar ka duwan tahay cabbirka khariidada sare, waayo xilligaas 1888 ma jirin aalada casriga ah ee GPS).
Xadka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya waxa uu ku dhammaadaa dhul siman oo xeebta ah. Marka xeebta laga bilaabo xarriiq fogaan is-leeg u jirta labada dal, waxay xarriiqdaasi gaareysaa barta ku beegan Loolka iyo Dhigta 3° 30′ S, 44° 19′ E – waa marka ay xarriiqdaasi (oo ka bilaabaneysa xeebta barta 1° 39′ 13″ S, 41° 34′ 02″ E) ay gaarto fogaan xeebta si toos ah uga durugsan 200 nmi (oo ah Aagga Gaarka ah ee Ganacsiga), sida ka muuqata Khariidadda hoose.
FG: Xusuuso in aan soo xusnay in xeerka badaha adduunku dhigayo in fogaanta laga cabirayo badda ay noqoto mid toos ugu beegan xeebta – Dawladdii Soomaaliyeed arrintaas aad ayey ugu dhaganayd, waayo, sida aan hoos ku arki doono, faa’iido ayaa Soomaalida ugu jirta in la raaco xeerkaas marka la cabbirayo xadka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Maadaama xeebta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ku dhereran tahay jihada KoonfurGalbeed – WaqooyiBari (SW-NE), markaas xarriiqda xadaynta badda ee labada dal u jirta fogaan is-leeg waxaa loo cabirayaa dhanka jihada KoonfurBari (SE). Inkasta oo ay dhici karto in Kenya ay sheegi karto in xarriiqdaasi ay xagal daacineyso Kenya, haddana Soomaaliya waxaa Juquraafi ahaan xagal daaciyey Jasiiradda Suqadara iyo jasiiraha ku xeeran, oo 55 nmi oo keliya u jira Raas Casayr, oo ah cirifka WaqooyiBari ee Afrika.
Khariidad: Jihada Xadka Soomaaliya iyo Kenya Eeg sawirka oo weyn….
Sida aan kor kusoo xusnay, xeebta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxay dhacdaa loolka iyo dhigta (1°39’13″S, 41°34’02″E). Halka barta xadayneysa fogaan xeebta u jirta 200nmi (370.4km) ay dhacdo loolka iyo dhigta (3°30’S, 44°19’E) – cabbirkan oo ay ogeyd dawladdii Soomaaliyeed. Haddaba marka cabbirka laga bilaabo xeebta oo toos loo socdo dhanka badda fogaan cusub oo ah 350 nmi waxaa markaas (qiyaastii) barta cusub ee xadayneysa badda Soomaaliya iyo Kenya ay dhacaysaa loolka iyo dhigta 4°54’13″S, 46°24’55″E. Waxaana halkaas ka soo baxaysa xarriiq muhiim u ah xadaynta badda u dhaxaysa labada dal, taas oo la barbar dhigi karo cabbirada ay Kenya u gudbiso Qarammada Midoobay.
Dhanka kale, sida aan kor kusoo xusnay, Xeerka badaha ee hadda la doonayo in la dhaqangeliyo, waxa uu qeexayaa haddii May 13, 2009 aysan dalalku ku keenin cabbirka khariidadaha ee xadaynaya badda wixii ka baxsan 200nmi, waxaa markaas badda wixii intaas bannaanka ka ah la wareegi doona hay’adda ISA, taas oo ka kirayn karta dalal kale si ay uga kalluumaystaan ama macdan iyo batrool uga baartaan. Taasi waa muhiim in lagu baraarugsanaado waxsoosaarkii hore ee kalluunka Soomaaliya.
Boqortooyadii Ingriiska iyo Talyaaniga ayaa waxaa dhex maray heshiis dhacay 15kii July 1924, laakiin ay isku raaceen 17kii December 1927, heshiiskaas oo ku saabsanaa calaamadinta xadka Soomaaliya iyo Kenya. Xadayntaas waxaa ku cad in shanta (5) jasiiradood ee loo yaqaan LAMA SHAAQA ay leedahay Soomaaliya, jasiiradahaas oo Koonfur ka xiga Raas Kambooni – macnaha ay arrintaasi u leedahay xadaynta badda gadaal ayaan ka arki doonaa. (FG: Xadka laga hadlayay waxa uu NFD raacinayay dhanka Kenya. Soomaaliduna ma aqoonsanayn taas maadaama NFD ka maqan tahay, laakiin sida aan warbixinta hoose ku arki doono, Kenya waxay hadda kusoo xad gudubtay xadkii xilligaas loo kala calaamadiyey Somalia iyo Kenya).
16kii iyo 26kii June 1925 xiriir dhexmaray safiirkii Boqortooyada Ingriiska u fadhiyay magaalada Rooma iyo madaxa dawladda & Wasiirka Arrimaha dibadda ee Boqorkii Talyaaniga ayaa waxay isku raaceen halka la marinayo xadka dhanka Koonfureed ee Soomaaliya-Kenya. Waxaana heshiiskaasi dhigayey in “Raas kambooni iyo jasiiradaha u dhaw ay hoos tegayaan dhanka Soomaaliya”.
Guddi labada dal (Ingriis-Talyaani) waxay xilligaas u xilsaareen arrinta xadaynta waxay ogaadeen in ay jiraan lix jasiiradood oo ku dhaw Raas Kambooni. Mid jasiiradahaas kamid ah waxay ku dhagan tahay Raas Kambooni, 5-ta kale waxay qiyaastii 2km dhanka Koonfur-Galbeed kaga aaddan yihiin Raas Kambooni, waxaana loo yaqaan Lama Shaaqa (Isolotti Lamasciaca ama “Diua Damasciaca“). Jasiiradahaas tan Koonfurta ugu xigta waa dhagac weyn oo cabbirka dhexroorkiisu yahay 50 mitir. Heshiiskaas waxaa si qeexan ugu qoran in “Jasiiradaas yar ee Koonfurta ugu xigta 5-ta jasiiradood ay tahay barta xadaynaysa badda Kenya iyo Soomaaliya. (Waa haddii marka hore aan laga hadlin NFD oo xadku halkaas dhanka Koonfureed ka sii xigi karo.)
Qoraal kale oo ay is dhaafsadeen Talyaaniga iyo Boqortooyada Ingriiska, 22kii November 1933, ayaa sii xaqiijiyay xarriiqda iyo barta xadayneysa badda Kenya-Soomaaliya, waxaana qormadaas (Italy-Britain) ku qeexan in: xarriiqda xadaynaysa badda (Soomaaliya-Kenya) waxay dhanka Galbeed ka maraysaa cirifka Koonfureed ee jasiiradda Koonfurta ugu xigta 5-ta jasiiradood ee LAMA SHAAQA. Waxayna xarriiqdaasi u soconeysaa jihada Koonfur-Bari, waana xarriiq toos ah oo xagal qumman (90°) ugu qotonta jihada ay xeebtu ku dherersan tahay (taas macnaheedu waa: maadaama barta xadka kaga beegan xeebta ay jihadeedu tahay WaqooyiBari – KoonfurGalbeed, markaas xagasha taas ku qotonta jihadeedu waa dhanka KoonfurBari, sida aan ku soo aragnay dhanka sare ee warbixintan).
Dowladii Somaaliyana waxay xiligeedii ma dhaafin cabirkii (Italy- Britain) ay waagaas sameeyeen. Waxaa xusid mudan in labada dalba lagumaystay oo wadanka Soomaaliyana xornimmada ka hor qaaday Kenya, waxaa kaloo jirtay in wadanka Soomaaliya xornimmadii kadib, uu wadanka Kenya xaga Military-ga uu aad uga horeeyey, ama aad uga xoogbadnaa, laakiin labadaas arrimood ma keenin in wadanka Soomaaliya ku xadgudbo xuduud-beenaadka gumaysigu sameeyeen oo Kenya loogu sadburiyey. Mana dhicin inuu iska cabirto badda waagaas Kenya loo qoondeeyey, waxaanse marnaba reebanayn sheegashada iyo doonista in dalka xooga laga gooyey uu kamid yahay Soomaaliya, inuu dib ula soonoqdana ay ka go’antahay.
Wareegtada oo 9kii June 2005 uu saxiixay Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki, qodobkeeda 1aad, farqadda (b) waxaa ku qoran in xadka dalkiisu dhanka badda kala wadaago Soomaaliya ay xadayso Koonfurta Jasiiradda Lama-Shaaqa oo dhacda Loolka 1°39’34″S. Loolkaas oo u soconaya Jihada Bari, sida ka muuqata khariidadda hoose oo qayb ka ah wareegtada Kenya. Waxaana jira qoraal ay xukuumadda Kenya u dirtay Qarammada Midoobay 25kii April 2006 kaas oo xusatay wareegtadaas.
Buugaag badan ayaa laga qoray halka uu maro khadka kala qaybiya xadka dhul-badeedka Soomaaliya iyo Kenya. Dhammaan buugaagtaasi waxay muujinayaan in xarriiqda xadaysa ay jihadeedu tahay Koonfur-Bari. Buugaagtaas waxaa ka mid ah buugga cinwaankiisu ahaa “Ammaanka deegaanka iyo caddaalada dalalka ku xeeran Badweynta Hindiya” oo la qoray 2008, bogga 104-105 (Doyle & Risely 2008, 104-105). Buugaasi qaybta ka hadlaysa dhul-badeedka Soomaaliya iyo xadka dalalka deriska la ah waxaa ka mid ahaa hadaladiisii qormadan hoose:
Marka laga hadlayo xadka badda Soomaaliya iyo Kenya, marka la eego xarriiqda isku in u jirta labada dal waxay u soconeysaa jihada Koonfur-Bari, waxaana jihada xarriiqdaas xaddidaya waa xeebta laga cabbir qaadanayo dhanka ay u jihaysan tahay iyo jasiirad yar oo ay leedahay Soomaaliya oo aagga ku taal (Prescott & Schofield 2005, 465-66). Arrintaasi maadama Kenya aysan jeclaysan, waxay qaadatay go’aan ay la gaar tahay (iyadoo jebineysa xeerkii badaha oo ay saxiixday, kuna soo xad gudbeysa xornimada Soomaaliya), waxayna Kenya ku andacootay xarriiqda xadayneysa aagga EEZ ee badda ay la wadaagto Soomaaliya in ay tahay mid u soconeysa dhanka “Bari” oo maraysa loolka 1° 38′ S. Xarriiqdaas oo fogaan badan aad Waqooyi uga xigta xarriiqda xadka badda Soomaaliya-Kenya ee aan kor kusoo xusnay ee ahaa jihada Koonufur-Bari (Bradley et al. 2000, 192, 288).
Tusaale ahaan, hay’adda ICSF (oo ah NGO caalami ah oo xafiisyo ku leh Belgium iyo Hindiya) oo warbixin ka diyaarisay bedka dhul-badeedka dalal ku xeeran Badwaynta Hindiya ayaa si qeexan u muujisay in bedka badda (EEZ) ee Kenya uu yahay 104,700 km2. Halkaas waxaa ku cad in cabirka cusub ee Kenya uu gudaha badda Soomaaliya ugu jiro dhul-badeed baaxaddiisu dhan tahay in ka badan 37,700 km2.
Waxaa dhici karta in Kenya si indha-sarcaad ah ugu andacooto in jihada xarriiqda ay u samaysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya tahay mid la barbarro ah jihada xarriiqda xadaysa Kenya iyo Tanzania. Ugu horayn juquraafi ahaan waa kala duwan yihiin labada xad, waayo xarriiqda xadaynaysa Kenya iyo Tanzania waxaa xanibaya jasiirad ay leedahay Tanzania oo aan xeebta aad uga fogeyn, taas oo lagu magacaabo Pemba (oo loo yaqaan ‘Al Jazeera Al Khadra‘ ama jasiiraddii cagaarnayd, taas oo dhanka Waqooyi ka xigta Zanzibar).
“20kii March 2009 ayaa Jamhuuriyadda Yemen waxay Guddiga xadaynta badaha Adduunka ee UN-ta u gudbisay cabbirada xadaynaya dhul-badeedka ka baxsan fogaanta 200nmi ee qalfoofka qaaradda, ayada oo raacaysa qodobka Article 76, qaybtiisa 8, ee xeerka badaha Qarammada Midoobay ee 10kii December 1982,” sidaas waxaa ku bilowday qoraal ay 20kii Maarso 2009 faafisay shabakada UN-ta. – Waxaana shabakadda UN-ta ku xusan in qoraalka ay soo tebisay Yemen lagu dari doono qorshaha ay ka wada hadli doonaan Guddiga Qaraammada Midoobay shirkooda 24aad oo New York lagu qaban doono inta u dhaxaysa 10ka August ilaa 11ka September 2009.
Xadka xeebta ee Kenya iyo Soomaaliya wxaa ku dhow jasiirado yaryar oo xiriirsan oo loo yaqaan Lama Shaaqa. Axdigii “1924 Anglo-Italian Treaty” waxa uu si Qeexan u sheegayaa in jasiiradahaasi ay raacsan yihiin dhulka hoos imanayay Talyaaniga, sidaas daraadeed jasiiradahaas waxaa hadda leh Soomaaliya. Xeebta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waa xeeb siman, marka xeebtaas laga socdo xarriiq labada dal isku in u jirta oo dhanka badda loo socdo 200nmi ee aagga Ganacsiga (EEZ), barta xadaysnaysa waxay dhacdaa loolka iyo dhigta 3°30’S iyo 44°19’E. Maadaama xeebta labada dal xadaynaysa ay ku dherersan tahay jihada KoonfurGalbeed-WaqooyiBari, markaas xarriiqda xadaynaysa badda labadaas dal waxay u soconaysaa jihada Koonfur-Bari.
Waxaa aad muhiim u ah in si weyn isha loogu hayo xadka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Yemen, maadaama gacanka cadmeed uu u kala baran yahay labada dal, waa in la hubiyo in aan Yemen soo ruuqaansan ama xadkeeda u soo durkin dhanka Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas tahay meel muhiim weyn ku leh dhaqaalaha adduunka. Waxaa kale oo muhiim ah in lagu baaraarugsanaado in dalka Yemen loo malaynayo in ay shidaal ka sahamiyeen aag aad ugu dhaw cirirfka waqooyi ee Soomaaliya ee la ollogga ah Suqadara. (Arrintaas waxaan December 2007 ka qornay qoraal cinwaankiisu ahaa “Dalka Yemen oo Batrool ka Baaranaya Badda Soomaaliya?“.
Sidoo kale waxaa taxadar weyn u baahan in isha lagu hayo xadka badda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana xusid mudan in lagu tuhmayo Kenya in ay hore baaritaan sahamin shidaal ugu samaysay Lamu meel u dhow oo loo malaynayo xadka xiga badda Soomaalida. (Arrintaas waxaan Janaayo 2007 ka qornay qoraal cinwaankiisu ahaa “Kenya ma Badda Soomaaliyeed ayey Shidaal Ka Qodaneysaa?“.
Waxaa laga rajaynayaa wadammada xuduudaha badaha la leh Soomaaliya inaysan kusoo ruqaansan iyagoo ka faa’iidaysanaya, Dowlad rasmi ah oo wadankaas ka jirin daraadeed. Waxaase laga filan karaa waddamadaas inay kusoo durkaan baddaha Soomaaliya, sida dhacda inbadan in uu damac galo banii’aadamka hadii ay arkaan wax dayacan (sida Kenya khariidada cusub ee dhul-badeedkeeda ku muujisay), haddii ay dhacdo in ay soo durkaan, sida hadda ka muuqata dowlada Kenya inay si caddaan ah ugu xadgudubtay xuduudka badda ee ay laleedahay wadanka Soomaaliya, waxaa jirta in Maxkamadda Caalamiga ah shaqadeeda ay ka mid tahay in ay kala saarto waddamada isku qabsada xuduudaha baddaha. Waxaa xusid mudan in xiligan qareenada Maxkamadda Caalamiga ah ee Adduunka uu ka mid yahay qareen Soomaali ah.
Warbixin ay January 2005 daabacday hay’adda cuntada adduunka FAO ayaa xustay tirakoob lagu sameeyay kalluunka badda Soomaalida sannadihii 1970-naadkii iyo 1980-naadkii, taas oo sheegtay in mugga kalluunka ee sannad kasta si joogto ah looga soo saari karo aagga ganacsiga (EEZ) ee Badweynta Soomaalida in uu yahay 200,000 ton. Islamarkaasna badda Soomaalida waxaa ku jiraan noocyada kalluunka qaaliga ah, sida Tarraaqada, Tabadiin (Tuna), Aargoosato, Libaax-badeed iyo noocyo kala duwan oo kalluun ah.
Dhanka khayraadka batroolka, waxaa si weyn loogu malaynayaa in batrool dhex jiifo dhul-badeedka Soomaalida. Waxaana jirta sahamin lagu sameeyey xeebtii loo aqoonjirey “Xeebta Banaadir” muddadii u dhaxaysay 1958 ilaa 1982, gaar ahan xeebta Cadale iyo Raas Kambooni, laakiin macluumaadkaas si wanaagsan loogama helin shirkadihii baaray ilaa haadda. Aagga ay kenya ku soo durugtay waxa uu soo hoos gelayaa badweynta Soomaaliyeed ee khayraadkaasi ku jiro.
Safiirka Soomaalida wakiilka uga ah Qarammada Midoobay – oo lagala xiriiri karo http://www.un.int/somalia
Maxkamadda Adduunka oo qaabilsan xallinta muranka dhex mara dalalka – waxaana lagala xiriiri karaa http://www.icj-cij.org/
FG: SomaliTalk.com warbixintan waxay March 5, 2009 gaarsiisey Safaaradda Soomaalida wakiilka ugu ah Qarammada Midoobay xarunteeda New York. Waxaana arrintaas wax ka weydiiney safiirka, Dr. Cilmi Axmed Ducaale, gaar ahaan sida uu u arko xadaynta cusub ee badda, sida wax looga qaban karo arrinta khusaysa badda Soomaalida, waxa ay arrintaas Safaaraddu kala socoto iyo waxa ay safaaraddu ka qabatay maadaama ay wakiil Qarammada Midoobay uga tahay Soomaalida?. Safiirku waxa uu ku soo koobay jawaabtiisii “Safaaraddu waxay aaminsan tahay in Soomaalidu xaq u leedahay in loo kordhiyo baaxadda badda in u dhiganta inta loo kordhiyay dalalka kale ee adduunka” sidaa waxaa yiri H.E. Dr. Elmi Ahmed Duale (oo toos loogala xiriiri karo http://www.un.int/somalia).
 Ratio-Magazine: Caddadkii soo baxay February 9, 2009 ayuu qoray qoraal cinwaankiisu ahaa “Kenya: Dawladdu ma awoodi kartaa in ka gaari karto waqtiga loo qabtay si ay u sheegato cabbirka baddeeda si loogu kordhiyo” http://www.ratio-magazine.com/ (Kenya: Can Government Beat the Deadline to Lay Claim to Expanded Territorial Waters?)
 Madaxda Soomaalida waxaan ula jeednaa: Madaxda DFKMG (Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha & Baarlamaanka), Puntland (Madaxweynaha, Kuxigeenka & Golaha Wakiillada), Somaliland (Madaxweynaha, Kuxigeenka & Golaha Guurtida), Culimada, Isimada, Aqoonyahanka Soomaaliyeed & iyo Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin. Sida aan warbixintan ku arki doono, ARRINTANI WAA QADDIYAD DADKA SOOMAALIYEED.
— 12 nautical mile oo badda ah waxay ka mid tahay dhulka dalka xeebta leh (Territorial Sea). (Sida uu dhigayo Qodobka Article 3 ee xeerka UNCLOS 1982).
— Waxaa taas dheer 12 nmi oo loo yaqaan Contiguous Zone (sida ku cad Qodobka Article 33 ee UNCLOS.)
— 200 nautical mile oo k adurugsan xeebta waxaa loo yaaqaan qaybta Ganacsi ahaan Khaaska u ah dalka xeebta leh, EEZ (Exclusive Economic Zone) (Sida ku cad Qodobka Article 57 ee UNCLOS), fogaantaas oo ka soo bilaabanaysa barta asaaska u ah badda. Sidaas daraadeed EEZ waxaa ka mid ah TS iyo CZ. Aagga EEZ waa qaybta dalka xeebta leh xaqa u siineysaa sahaminta khayraadka dabiiciga ah ee ku jira sida kalluumaysiga, Macdan iyo batrool ka qodista, iwm.
 Buugga “Exclusive Economic Zone Claims” oo uu qoray Robert W. Smith, bogga 27aad.
 Buugga “Eastern African States and the Exclusive Economic Zone“ ee uu qoray Aggrey K L J Mlimuka, bogga 51-55, waxa uu ku muujiyey ujeedada ay Soomaaliya ka lahayd in ay kordhiso badda ay xaqa u leedahay in ay ahayd sidii ay uga faa’iidysan lahayd kalluunka ku jira badda dhulkeeda.
 February 5, 2009 tirada dalalka dhaqan geliyay xeerka badaha Adduunka waxay ahayd 157 dal. Dukumiintiga Qarammada Midoobay http://www.un.org/Depts/los – Qarammada Midoobey waxaa ku jira ama xubno ka ah 192 dal.
 Kulankii 19kii June 2007 ee Guddiga Xadaynta Badaha, oo uu ka hadlay madaxa guddiga ay Qarammada Midoobey u xilsaartay xeerinta iyo falanqaynta xogta ku saabsan cabbirrada badaha ee dalalku u soo gudbiyaan ayaa tibaaxay in hawsha hor taal baaxadeeda awgeed ay dhici karto in xogtaas oo waqtiga ugu dambeeya ee Qarammada Midoobey lagu soo wareejin karo ay tahay May 2009 in dalalka qaar marka ay xogta soo wareejiyaan jawaabta la siin doono ay aad uga daahi karto mudd dheer ilaa 2035, taas oo dib u dhac weyn ku keeni karta in dalalkaasi ay ka faa’iidaystaan khayraadka badahooda wixii ka baxsan 200nmi. Wakiilka Sri Lanka shirka uga qayb galay ayaa sheegay in aysan ahayn arrin la aqbali karo in jawaabta la sugo ilaa 2035, waa in taas xal loo helaa ayuu yiri. Sidoo kale wakiilkii Hindiya kulankaas uga qayb galay ayaa arrinta Guddiga QM kaga jawaabay in aan la aqbali karin. Guddiga Xadaynta Badahu waxay sheegeen in si hawsha culus ee soo food saartay loo fuliyo in loo baahday qalab iyo software (computero) lagu qiimeeyey $1.7 million – (Arrimahaas oo jira haddana sida qoraalkan ku suxan waxaa bilaabatay in dalal loo ansixiyey badda ay kordhisan doonaan). http://www.un.org/News/Press/
 Qodobka Article76 ee Xeerka badaha Adduunka waxa uu qeexaya micnaha Qalfoofka Qaaradda “Continental Shelf” iyo sida lagu cabiri karo ama loo xadayn karo badda inta dalku yeelan karo.http://www.un.org/Depts/los/. Sawirro muujinaya Qalfoofka Qaarada ka eeg bogga Jaamacadda MIT: http://web.mit.edu/. Sidoo kale ee Sawirkan ama eeg http://www.un.org
 Jasiirada Suqadara (Socotra) dadka ku dhaqan oo tiradooda lagu qiyaaso 50,000-qof waxay asal ahaan ka soo jeedaan Carab, Soomaali iyo Koonfurta Aasiya. Waa dad Muslim ah. Waxayna jasiiradaasi hoos tagtaa xukuumada Yemen. Dhanka kale Soomaaliya waxay hore u sheegatay in ay jasiiradaas ayadu leedahay. Taariikh ahaan 1507 ayaa jasiiradaas waxaa qabsaday Bortoqiiska, afar sano kaddib ayaa Bortiqiiskii baxay, waxaana markaas 1511 la wareegey Boqortooyadii Mahra Sultan. Sannadkii 1886 ayey jasiiradaasi hoos tagtay Boqortooyadii Ingriiska. October 1967 ayaa la baab’iyey boqortooyadii Mahra, isla bishii November 1967 ayaa jasiiradaas lagu wareejiyey Yemen. Jasiiradda Suqadara oo caqadba ku ah badda Soomaalida: (Prescott & Schofield 2005, 465)
 Buugga “International maritime boundaries” oo ay qoreen American Society of International Law (2005), Bogga 3455.
 Buugga “African States and Contemporary International Law“, oo uu qoray Tayo O. Akintoba (1996), bogga 125aad, waxaa ku cad shax muujineysa cadadka kalluunka ee badda Soomaaliya laga jillaabi jirey, buugga oo soo xiganay hay’adda cuntada adduunka ee FAO: 1979-1981 (34,837,000 ton), 1982-1984 (39,564,000 ton), 1985-1987 (49,967,000 ton), 1988-1990 (52,518,000 ton).
 Lama Shaaqa: waa shan jasiiradood oo ku yaal Koonfurta Raas Kambooni ee Gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Waxa kale oo jasiiradahaas loo yaqaan (Isolotti Lamasciaca ama “Diua Damasciaca“).
 Buugga “Crucible for Survival: Environmental Security and Justice in the Indian Ocean Region” oo ay qoreen Timothy Doyle, Melissa Risely (2008) bogga 104-105.
 ICSF oo laga soo gaabiyey (International Collective in Support of Fishworkers) waa hay’ad NGO oo caalami ah oo qaabisan horumarinta iyo maaraynta khayraadka kalluumaysiga, waxayna xafiisyo ku leedahay Hindiya iyo Belgium: http://www.icsf.net/
 Kenya iyo Tanzania waxay 9kii July 1976 isku raaceen meesha uu maro xadkooda dhanka badda kaddib markii wada xaajood u socday intii u dhaxaysay 17 December 1975 – 9 July 1976: http://www.un.org/Depts/los
 Badda Cas: Sannadkii 1977 waxay badda cas noqotay meel is xulufaysi siyaasadeed ka taagnaa. February 1977 waxaa kulan ku saabsan badda cas oo ka dhacay magaalada Khartuum ka soo qayb galay madaxweynayaasha Masar, Suudaan iyo Suuriya. Waxayna soo saareen warsaxaafadeed wadajir ah oo ay ku xuseen “badda cas waa in ahaato meel nabad ah si ay uga faa’iidaan dalalka la olloga ah, waana in badda cas laga fogeeyo is qabqabsiga dalalka caalamiga ah iyo cadaadiska halista gelin kara ammaanka iyo xasiloonida gobolka.” Waxaa kulankaas ka daba qaatay kulan kale oo March 20, 1977 ka dhacay magaalada Taiz oo ay ka qayb galeen madaxweynayaashii Soomaaliya iyo Suudaan, waxayna wadajir u soo saareen warsaxaafadeed ay ku xuseen “Ammaanka Badda Cas waxa uu ku xiriirsan yahay ammaanka Bad Weynta Hindiya taas oo la rabo in ay ahaato goob ama haro nabad ah.”
 Qormadii SomaliTalk.com ee “Dalka Yemen oo Batrool ka Baaranaya Badda Soomaaliya?” (Dec 2007) – Eeg: http://www.somalitalk.com/oil/oil131.html
 Qormadii SomaliTalk.com ee “Kenya ma Badda Soomaaliyeed ayey Shidaal Ka Qodaneysaa?” (Jan 26, 2007) – Eeg: http://www.somalitalk.com/oil/oil91.html
 Maxkamadda Adduunku waxay 3dii February 2009 go’aan ka gaartey muran badeed u dhaxeeyay labada dal ee Romania iyo Ukraine. Arrintaas ayaa la xiriirtay dacwad September 2004 ay Romania u gudbisey maxkamadda, taas oo la xiriirta xadka ay Badda madow kala wadaagto Ukraine. Waxaana maxkamadda Adduunku go’aamisey xadaynta badda ee Qalfoofka Qaarada iyo Aagga Ganacsiga ee u dhaxeeya labadaas dal oo ay u jeexday xad. Go’aankii maxkamadda eeg: http://www.icj-cij.org/docket/files/132/14987.pdf
— Maxkamadda Adduunka waxyaabihii loo asaasay waxaa ka mid ahaa in ay dhexdhexaadiso muranka dhex mara dalalka adduunka, go’aana ka gaarto. Maxkamadda Adduunka sannadkii 1945 ayaa lagu asaasay Xeerka Qarammada Midoobay, waxayna ka kooban tahay 15 xubnood (Qareenno), oo loo doorto xilka muddo sagaal sano ah. Waxaana xubnihii ugu horeeyey la doortay 6dii February 1946.. Maxkamadda Adduunku xarunteedu waa magaalada Hague (Netherlands) Holland. Qareennada xubnaha ka ah maxkamadda Adduunka ee hadda (2009) waa: Japan, China, Sierra Leone, Jordan, USA, Germany, France, New Zealand, Mexico, Morocco, Russia, Brazil, Somalia, UK. Qareenka Soomaaliyeed ee ka mid ah maxkamadda Adduunka waa CabdulQawi Axmed Yuusuf waxaana 6dii November 2008 lagu doortay kulankii Qarammada Midoobay, waxana Abdulqawi Ahmed Yusuf uu hawshiisa maxkamadda Hague si rasmi ah u bilaabay 6dii February 2009 ilaa 2018.
 Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ee loo soo gaabiyo FAO (Food and Agriculture Organization): Warbixinteedii Janaayo 2005: http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/SOM/profile.htm
 Qormadii “Ceelasha Batrool ka Laga Baaray ee Xeebaha Banaadir, Maxaa Lagu Arkay?” ee uu qoray Eng. Cabdulqaadir Abiikar: http://www.somalitalk.com/oil/oil123.html
— Dukumiintiga Sharciga badaha (The Law of The Sea Documents: 1983-1989) waxaa ku qoran magacyada wakiilladii Soomaaliya uga qayb galay kulammadkii lagu samaynayey xeerka badaha adduunka intii u dhaxaysay 1983-1989, waxaana ka mid ahaa: Mohamed Issa Turunji, Lataliyaha xagga sharciga, Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Dakadaha. Jihad Ahmed Issa, Agaasime, Waaxda Arrimaha Badaha. Mohamud Gelle Yusuf, Wasiirka Madaxtooyada ee arrimaha bulshada iyo aamaanka, ahaana madaxa Guddiga Qaraanka ee Badda, oo hoggaaminayay waftiga Soomaaliya. Abdillahi Said Osman, Safiirka Soomaaliya wakiilka uga ahaa Qarammada Midoobay.
— Buugga (The Eastern African States and the Exclusive Economic Zone) oo uu qoray Aggrey K.L.J, bogga 26-27 waxaa ku xusan: Intii uu socday kulankii saddexaad ee Qaramada Midoobay (UNCLOS III 1973/1974) ee lagu samaynayey xeerka badaha qaybta aagga ganacsiga (EEZ), saddex dal oo Afrikaanka ugu cadcaddaa doonitaanka badda dalalkaasi leeyihiin in ay ka mid tahay dhulkooda waxay ahaayeen Guinnea, Madagascar iyo Soomaaliya. (UNCLOS III Official Records, Vol. 2, p. 209.) – A/CONF.62/C.3/L.12.
Somali pirates’ spokesman confirms new imminent attacks on the ships